Fandaharana 5 hamoronana GIF haingana sy mora | Vaovao momba ny gadget
Paco L Gutierrez | 16/03/2021 18:20 | Nohavaozina amin'ny 16/03/2021 22:27 | General, Software
Ny GIF dia efa nisy hatrizay, ampiasaintsika izy ireo isaky ny afaka, mihoatra ny rafitra fiasa saika ny finday rehetra no mampiditra azy ireo amin'ireo safidiny fitendry. GIF dia teny izay midika hoe Format fifanakalozana sary na amin'ny endrika fifanakalozana sary espaniola. Orinasa fifandraisan-davitra amerikana avaratra no namorona ity endrika ity, manohana loko 256 farafaharatsiny izy ary milalao sary andiany maharitra 5 ka hatramin'ny 10 segondra. Tsy manana feo izy ireo ary ny habeny dia kely kokoa noho ny fisie JPG na PNG.
Fahita ny mahita GIF fa tsy ny MeMes mahazatra, satria mihetsika ireo ary milaza amintsika mihoatra ny sary mijanona. Fahita ny fahitana azy ireo amin'ny forum an-tserasera na amin'ny Twitter, na dia mora aza ny mahita azy ireo amin'ny WhatsApp. Fa, Maninona no mampiasa GIF avy amin'ny hafa raha afaka mamorona ny antsika manokana isika? Misy programa sasany izay manamora kokoa antsika io asa io. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika ireo programa 5 tsara indrindra hamoronana GIF haingana sy mora.
5 Mpamorona GIF Gif
Saika programam-panovana sary sahan'asa be mpampiasa ampiasaina ho solon'ny PhotoShop, izay azo ampiasaina hamoronana GIF tsara indrindra ihany koa. Anisan'ireo asany marobe ny famoronana GIF, fa noho izany Ireo sary izay te-hanitsy anay dia tsy maintsy atao amin'ny endrika PNG. Na dia feno aza ity programa ity dia mety hampisavoritaka ho an'ny olona tsy dia manana traikefa, satria lehibe dia lehibe ny safidiny ka manafotra azy.
Raha te hanandrana izany isika ary hamorona ny GIF manokana ho fanampin'ny fanovana ny sarinay toy ny tena matihanina, dia afaka maka sy mametraka azy maimaim-poana amin'ny pejiny tranokala ofisialy. Ny programa dia azo alaina ho an'ny Windows ho an'ny MacOS.
Raha mitady programa tsotra nefa mahomby isika rehefa mamorona ny GIF sarimiaina, dia tsy isalasalana fa ity no tadiavintsika. Ireo rakitra izay hamboarintsika avy amin'ity programa ity dia hifanaraka amin'ireo mpizaha tranonkala rehetra ankehitriny ary afaka mizara sy mijery azy ireo tsy misy olana isika. Mba hanaovana izany dia ho ampy ny manampy ireo sary izay tiantsika ahitsy, mba hamoronana tsara ny sary mihetsika. Azontsika atao ny manamboatra ny masontsivana rehetra, manomboka amin'ny fotoana fampiroboroboana ka hatramin'ny hafainganana.
Ny editor dia manohana endrika JPG, PNG, BMP ary GIF. Ny zavatra tsara indrindra momba ny programa dia maivana be izy miaraka amin'ny lanjan'ny 5MB ary tsy mila fametrahana mialoha. Azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny pejinao Web ofisialy.
Ny fampiharana dia natao ho an'ny famoronana GIF mihetsika fotsiny. Ity rindranasa ity dia tsy mitaky fanandramana be loatra amin'ireo mpanonta sary satria tsotra be ny fampiasana azy ary hahafahantsika mamorona ny GIFs aminà dingana tsotra, mametraka fotsiny ny sary araka ny filaharany marina sy manitsy ny fotoana fampirantiana araka izay itiavantsika azy. Rindrambaiko loharano misokatra ka maimaimpoana tanteraka ary tsy mila fametrahana mialoha.
Ny fampiharana dia azo ampiasaina amin'ny kapila penina na kapila mafy ivelany satria tsy mila fametrahana ao amin'ny rafitra fiasa. Manohana endrika maro izy ao anatin'izany ny PNG, JPG, BMP ary GIF. Na dia tsy mitaky fametrahana aza izany dia tsy maintsy havaozina ny Java ao amin'ny ekipanay. Ny interface dia somary fohy nefa tsotra ary ny fotoana fandefasana azy somary avo, fa ny valiny dia araka ny nandrasana. Raha te hanandrana an'ity fampiharana ity ianao dia azonao sintonina avy amin'ny tranokalan'ny mpamorona.
Iray amin'ireo suite tsara indrindra amin'ny fanitsiana sary. Ny fampiharana dia feno safidy amin'ny fanovana sary, fa koa ny safidy hamoronana ny GIF. Mahita safidy maromaro voarindra izay ahafahantsika manitsy sy manatsara ny sarinay mora foana. Mba hamoronana GIF dia mila mampiasa sary maromaro isika mba hamoronana ilay sary mihetsika. Ny programa dia tena intuitive sy mora ampiasaina, fa toy ny amin'ny GIFtedMotion, dia miadana sy mavesatra izy rehefa manodina, na dia mendrika azy aza ny valiny farany dia misy haingana kokoa.
Maimaimpoana tanteraka ity programa ity toa ny teo aloha ary azontsika atao ny misintona azy tsy mila fisoratana anarana mialoha amin'ny pejiny manokana Web ofisialy.
Mpamorona GIF Gif
Ary farany, programa iray izay miavaka amin'ny fampiasana azy mora sy ny interface tsara. Miaraka aminy isika dia afaka mamorona GIF sarimiaina maimaim-poana ao anatin'ny minitra vitsy. Izy ireo dia azo novolavolaina tamin'ny filaharan'ny sary nalaina tamina tranokala na avy amin'ny galeriany manokana. Na dia manana safidy hamorona GIF avy amin'ny horonan-tsary ihany koa izahay na avy amin'ny galeriantsika na avy amin'ny YouTube na fampiharana horonantsary hafa. Tsy isalasalana fa rindranasa iray izay manome kilalao betsaka rehefa mamorona ny sarimiaina ampiasainay hampiasaina na aiza na aiza.
Ny zavatra tsara indrindra momba an'ity rindranasa ity dia ny fisoratana anarana amin'ny Internet ka tsy mila fametrahana mialoha akory izahay fa ampidiro fotsiny ny tranokala ofisialy ary ampiasao ny iray amin'ireo asany isan-karazany arosony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Fandaharana 5 hamoronana GIF haingana sy mora
FreeBuds 4i: Huawei dia miverina amin'ny lakilen'ny kalitao / vidiny